Waxgaradka Jubbaland oo ka soo horjeestay Nidaamka 4.5-ka – Radio Daljir
Diseembar 17, 2015 3:58 b 0
Somalia, December 17, 2015-(Daljir)_Odayaasha dhaqan Jubbaland oo kulan isugu yimi magaalada Kismaayo ayey uga soo horjeedeen in la qaato waxa loogu yeero 4.5,waxayna sheegeen inay go’aankooda ay uga soo horjeedaan 4.5ka ku taageerayaan madaxweynayaasha Jubbaland iyo Puntland.
Waxgarad iyo Nabadoonada ka qayb galay kulankaas ayaa sheegay inay tahay Mustaqbal madow hadii lagu laabto habka 4.5ka, islamarkaana loo baahan yahay in aan dib udhac kale lagu laaban.
Waxay sheegeen in dadka Soomaaliyeed ay dantoodu ku jirto deegaan in lagu soo xulo baarlamaanka cusub ee imaan doono, iyagoo carabaabay hadii taasi ay hirgasho inay tahay hormar weyn oo umadda Soomaaliyeed ku talaabsatay.
Dhanka kale Odayaasha ayaa dhaliilay islamarkaasna khiyaano ku tilmaamay wararka sheegaya in la qaadan doono gole dhaqan oo lagu soo xulayo hab deegaan.
Puntland iyo Jubbaland ayaa ka midaysan in doorashada 2016 lagu saleeyo hab deegaan,shacabka ku nool labada dhinac ayaana u codeeyey,Garowe iyo Gaalkacyona waxaa shalay ka dhacay kulamo looga soo horjeedo 4.5ka.
kulamada ay yeelanayaan Shacabka Puntland iyo Jubbaland ayaa yimi kadib markii Madaxweynayaasha Puntland iyo Jubbaland lagu cadaadiyey inay qaataan 4.5ka,walow iyaguna ay ku adkaysteen go’aankoodii.